Galmudug oo ku eedeysay dowladda Federaalka inay jartay kaalmadii lacageed ee ay siin jiray – Banaadir weyne
Galmudug oo ku eedeysay dowladda Federaalka inay jartay kaalmadii lacageed ee ay siin jiray
19 Oktoobar, 2017
Maamulka Galmudug ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya inay ka jareen maamulkooda kaalmadii lacageed ee la siin jiray bil walba.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasiirka Warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan (Messagaway) ayaa lagu sheegay in lacagaha laga jartay loo adeegsanayo in la siiyo ciidamada, si loogu burburiyo maamulka Galmudug.
“Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, waxay goor hore ku bilaabeen cunaqabatayn dhaqaale Dowlad goboleedka Galmudug, kaddib markii ay ka jareen lacagtii kaalmada ahayd ee ay siin jireen, waxaana hantidii qaranka loo adeegsanayaa bur burinta Maamulka u dhisan Galmudug”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Galmudug.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in qaar ka mid ah Xildhibaanada Galmudug ay abaabulayaan in 22 October inay doortaan Madaxweyne, waxaana uu ka digay in xaalada siyaasadeed ee Galmudug ay waji kale yeelato.
“Qaar ka mid ah Xildhibaanada Galmudug, waxay doonayana in 22 bishan October inay Cadaado dhexdeeda ku doortaan Madaxweyne, waxaana arrintaas lagu bixinayaa lacag fara badan, waxaa maleeshiyaad hubeysan lagu soo gurayaa magaalada, arrimahaas waxay dhalin karaan iska hor imaad ka dhasha wax walba”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Galmudug.
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay Guddoomiyaha golaha shacabka iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare, Beesha caalamka inay si deg deg ah u soo fara geliyaan xaalada ka jirta Galmudug iyo inta aysan xaalada faraha ka bixin, wixii dhibaato ee ka dhashay fara gelintaas uu mas’uuliyadeeda qaadayaan Madaxda dowladda. – Jowhar News
Ciidamada DFS oo Qarax xoogan lagula eegtay Duleedka Magaalada Baydhabo
Maamulka Ahlusunna oo xilka ka qaaday Taliyihii ciidamada Ahlusunna iyo qilaaf ka dhashay xil ka qaadista
Dubabka dhaqanka Hiiraan & RW ku Xigeenka Somalia oo kulan ku yeeshay Baladweyne
AMISOM oo dishay ku dhawaad 17 Arday iyo macalinkooda
Soddon iyo lix mayd oo laga soo saaray huteel ku yaalla Manila
Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo u duulay dalka Sudan [Akhriso]
Dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay Iiraan